Musharaxiinta Madaxweyne Qaarkood oo keensaday qalab ay ku Ogaanayaan Xildhibaanada u codeeyay +Sawirro! | kowtharmedia.com
Home WARAR Musharaxiinta Madaxweyne Qaarkood oo keensaday qalab ay ku Ogaanayaan Xildhibaanada u codeeyay +Sawirro!
Musharaxiinta Madaxweyne Qaarkood oo keensaday qalab ay ku Ogaanayaan Xildhibaanada u codeeyay +Sawirro!
Feb 04, 2017WARAR
Musharaxaxa ugu wayn Daamujadiid oo bilaabay cabsi galin ku saabsan Xildhibaanada iyo qalab jaajuus uu ugu handadaayo Xildhibaanada lacagta uga gatay inay ucodeyn doonaan Asaga iyo xaalada oo oo sii adkaatay waxaana ku soo biiray Dowlado shisheye.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa 8-da Bishan Febraayo in ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya, waxaana doorashada ku tartami doona 23-Musharax oo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa Musharaxiinta.
Doorashada sanadkan ka dhaceysa magaalada Muqdisho ayaa ah mid xiiso gaar ah leh kana adag doorashooyinkii hore, waxaana wali adag in Musharax gaar ah loo saadaaliyo in uu kusoo baxayo Kursiga Madaxweynaha.
Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha ayaa wada xod xodashada iyo kasbashada Xildhibaanada labada Aqal, waxa ayna Musharaxiinta Xildhibaanada u sameenayaan Balna qaadyo siyaasadeed iyo waliba mid maaliyadeed.
Sida aan xogo hoose ku helnay Musharaxiinta qaarkood ayaa ka wal walsan in Xildhibaanada qaar ay lacag badan ka qaataan codkana ay dhinac marsiiyaan, waxa ayna Musharaxiinta qaar bilaabeen raadinta qorshe ay uga bad baadi karaan in la qiyamaeeyo.
Musharaxiinta qaarkood ayaa bilaabay in ay diyaarsadaan qalab yar oo loo dhiibayo Xildhibaanada marka ay codeenayaan , Qalabkan yar ayaa ah mid sawir ka qaadaya warqada uu Musharaxa ku codeenayo si loo ogaado halka uu codka siiyay.
Qalabkan ay diyaarsadeen Musharaxiinta qaar ayaa ku xiran Cloud Server kale oo markiiba laga arki karo qofka uu u codeeyey, qalabkan ayaa isugu jira okiyaale, Saacado device-yar oo kale Telefonka gacanta iyo weliba Qalimaan.
Musharaxiinta qaar ayaa qalabkan waxa ay ugu talagaleen in ay u qeybiyaan Xildhibaanada codeenaya si ay u ogaadaan Xildhibaanka u codeeyay iyo midka aan u codeyn, waxaana qalabkan uu wal wal ku beerayaa Xildhibaanada oo doonaya in meelo badan lacago ka helaan hal Musharaxna u codeeyaan.
Waxaa sidoo kale jira Qorshe kale oo Musharaxiinta qaar kula talinayaan Xildhibaanada taabacsan in ay qaataan labo Telfoon midna ay iska dhigaan marka ay codka dhiibanayaan, halka midka kalana ay sawir uga qaadayaan Warqada uu ku codeeyay Xildhibaanka.
Guddiga doorashada ayaa laga yaabaa in caqabad kala kulmaan qalabkan wax sawiraya ee Xildhibaanada qaar loo qeybinayo, waxaana hadii aan laga hortagin arintan imaan karta in doorashada ay noqoto mid aan hufneyn oo Musuq maasuq uu hareeyo.
Xalka kaliya ee looga hortagi karo qorsha ay Musharaxiintan ku doonayaan in ay ku ogaadaan Xildhibaanada codka siiyay ayaa noqon kara in Guddiga Doorashada ay wax ka beddelaan qolka Xildhibaanada codka ku dhiibanayaan, lagana dhigo halka lagu codeenayo meel aan xirneyn oo loo wada jeedo kaliyana uu Xildhibaan qarsan karo qofka uu codkiisa siinayo si aysan u dhicin in la sawiro warqada .
Previous PostJaamacadda Carabta oo soo dhoweysay go’aankii Maxkamadda Caalamiga ee ICJ! Next PostMusharax C/raxmaan C/shakuur oo Qudbad ka hor jeediyay Baarlamaanka!!